BAALE:Saamtota Jennaan moo Investaroota jennaan ...?? Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBAALE:Saamtota Jennaan moo Investaroota jennaan …??
#Bullaallaa dinkittii plc( dhaabbata bullaallaa dinkittii)
Abbaan qabeenyaa kanaa ISHEETEE YEGZAW.
Maqaa investimentiitiin godina baalee Aanaa #gindhiiritti lafa qonnaa heektaara 518 qaba.
Ganda Shawwadee, iddoo addaa dinkittii jedhamtuu.Barri inni itti lafa kana fudhatee qotatuu eegale , bara 1992 irraa hanga ammaatti. Iddoo kanatti heektaara 1rraa midhaan kuntaala 18-30 tu oomishama. Qutee bulaan keenyas isaan walqixa oomisha. Investerrii tokko bu’aa investmentii isarraa argateerra ummataa naannoo lafaa saniitiif percentii kafaluun dirqama. Yoo xiqqaate misoomni bu’uraa kan akka karaa, m/ barnoota, kilinika, bishaan ummata naanichaaf kennamuu qaba , garuu namni kun heektara 518 waggaa 20 qotataa bahee misoomaa bu’uraa takkas dalagee hin beeku, inumaa yoo bosona naannoo jiru mancaase malee, kan silaa 2% nannawicha akka bosonaan uffatamu godhuu qabu.
kan biraa haa hafuu ummata keenya kan NS rraa daban biqqifameef wanti inni gumaache hin jiru.
waajjirri qonnaa godinichaa fi aanichaa kaayyoon isaanii maali??.
waajjiri Abbaa taayitaa galiiwwanii godina baalee fi aanaa gindhiir waggoota 20 dabran .maal dalagaa turan.?
Namnummaan kun aanaa gindhiir ganda.
-harawaa 7 , heektaara 188
-qabbannaa, heektara 44
– ardaa qabsoo, heektaara 86
Walumaa galattii #heejtaara_836 nama tokkoon qofa qabamee taa’a.
Heektaara tokko (1) irraa midhaan kuntaala 18_30 Kan argamu yoo ta’ee, Mee kuntaala 20n haa herreegnu, 836X20= 16720 Kuntaala 16720 waggaatti yeroo lama argata jechuu dha.
Kana jechuun waggaatti midhaan kuntaala 33440 lafa baalee irraa argata. Aliidhummaan namicha tokkoo kuniyyuu jiraataa baaleef BAALEE namoota 200f otuu hiramee, maatiin Mana tokko midhaan kuntaala 167.2 argachuu danda’a. Namoota 400f yoo hiramee hoo nama tokkoof kuntaala 83.6 argata jechuudha.
Inveestarri tokkichii qooda namoota 400 ol harkaa yoo qabaatee namoota akka INVESTARA kanaa baaleen qofa keessatti INVEESTAROOTA 43tu jira.
INVESTARA 43X400= 17
Obboo juneeydii saaddoo gaafa aangoo irra turan FINFINNEEN HANDHUURA OROMIYAA magaalaa guddittii OROMIYAATI nuun otuu hin jenne, obbo ABBAA DUULAA GAMMADAAN gaafa aangoo irra turan FINFINNEEN HANDHUURA oromiyaatii nuun jedhanii hin beekan. Garuu gaafa aangoo irraa bu’an qofa dubbii akkasii dubbatu. Saba kana kaartoona kijiba itti guuttatan se’anii yaadu moo…..?
OPDON hundii isaanii tokko. Warra kanatuu kana caala hin jedhamneedha.
Gaaffiifi deebii qondaala mootummaa duraanii Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa https://t.co/HmZnOc7X5G pic.twitter.com/Bt2kmrHqcu
Oromiyaan komaandpostii waraana mootummaattiin bulaa nageenyii uummata waliin hin jiru.
Dhufaatin MME, DR ABIY AHMAD gara #afrikaa_kibbaa Baatii ittii aanuu January keessa dhufa , warrii lafa argachuufii dantaa mataa ofii calsifatanii laalan deeggarsaaf Wal qopheessa jiraataniis , warri sagalee uummata oromoof baratoota oromoo ajjeefamuuf hidhamaa jiraniif sagalee ta’uuf gara keessaattin na qunnamaa jirtan hanga ammaa namoota 22 qofaadha.
Kan haftaniis waliif dabrsaa galmaahaa…….
#BAALEEN_INVESTAROONNII_uummatatti Shira erga xaxanii, UUMMATNII BAALEE LAFA OFII dhuunfatuuf Kan dur caalaa qabsaahuun dirqama. Lafa qonnaa #ARSIIF_BAALEE cinaa, moottummaan qabamee, cinaaniis INVESTARA jechuun lafti uummataa saamamee , biyya ofii irrattii uummatnii guddinna dhabee waggoota hedduuf jiraataa turaniiru.
Ji’a tokko dura investroonni lafa qonnaa Baalee irraa qaban magaalaa Shaashamnneetti walgahii dhokataa taa’ani turan, dubbiin ijoon walgahii saniis ummata Baalee ka lafa ofii irratti gaafi mirgaa gaafate adabna ka jedhu ture, walgahi san irratti investeroonni ummata Baalee likkii galchina jechuun dhaadatan, kompiaaynerri midhaan haamu akka Baaleen hin dhaqne goona jechuun wali galanii addaan deeman.
Kuno dhaadannoo isaani san hojiirra olchani ummanni kombaaynara kaffaltii mallaqaatiin midhaan isaaf haamu dhabee harka ufiitiin albee qabatee haamatti seenee jira. Ummanni qaama mootummaa Baale jirutti dhimma kana dhiheeffatus qondaaltonni mootummaa garu gara Oromiyaa dhaqaatti iyyadhaa nuti homaa isiniif gochu hin dandeennu jedhan.
Gochi investeroota kun duura waraanaati( it’s an act of war ) , dhimma kana itti caldhisuu hin qabnu.
Baalee Ginnir keesatti mee Maqaa warra Investaroota Kan Lafa Qonnaa(irsha limat ) Qabatanii Irraa Duroomaa turanii fii Duroomaa jiranii waliin wal baradhaa.
1Asefe Degafe irsha limat
2Abrahm Getahun irsha limat (iddoo sadi )
3 Alula Damisse irsha limat
4 Arada kebsa irsha limat
5 Belawudo Grelando irsha limat
6 Bogale Meskalo irsha limat
7 Bulaladikniti irsha limat
8 Eshete Ygzawu irsha limat(iddoo lama )
9 Hasen Nasir irsha limat
10 Jumbe siyum irsha limat
11 Kabir Husen wako ( iddoo lama)
12 Mohammed Ali irsha limat
13 Minlitihon Bogale irsha limat 14 Nastanet Shiberu irsha limat 15 S.O.S irsha limat
16 Amin Jemal irsha limat
17 Ahmad Nuru irsha limat
18 Shulala Dakaki irsha limat
19 Solomon Aege irsha limat
20 Wondwosen Aseffa irsha limat
21 Wlda Afroaishiya irsha limat
22 Zowude Debabe irsha limat
Fa’a mee kan Aanaa Ginniir Qofti yoo kana ta’e kan Godina Baalee meeqa taha laata ijoolllee Baalee hojii dhabdee harka marattee teettuu miti lafti kun ilmaan oromoo hunda sooree irraa hin hafuu Bal’inna lafoota kanaa fii kan Aanota biroo biroo keessan jiran Ragaa qulqulleessaa kan itti deemnu ta’a Galma Gahiinsi Haaromsa Baalee kana fa’aaf lafa kammiif deebisuuf nu barbaachisa galatoomaa .
Ethiopia: ሰበር መረጃ – ዶ/ር አብይ አህመድ እስካሁን “ያልነገርኳችሁን ሚስጢር ያሉትን” ተናገሩ